0 Wednesday May 13, 2020 - 11:58:20
Maanta oo ah taariikhdu tahay 20 Ramadaan waxaa lagaaray 10-ka maalmood ee fadliga badan oo ay sunno tahay in qofka muslimka ah uu badiyo cibaadada si uu u helo habeenka Leylatul Qadriga oo Allaah ku sheegay in uu ka kheyr badanyahay Kun bilood.
0 Wednesday May 13, 2020 - 11:57:44
0 Wednesday May 13, 2020 - 11:56:44
Maamulka Puntland ayaa amar ku bixiyay in lasoo qabtay ciidamo fara badan oo iyagoo gadood ah ubaxsaday dhanka deegaannada uu ka arrimiyo maamulka 'Somaliland'.
0 Wednesday May 13, 2020 - 11:53:11
Wararka ka imaanaya gobolka Galguduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in iska hor'imaad khasaara dhaliyay uu ka dhacay gudaha deegaanka Guriceel.
0 Wednesday May 13, 2020 - 10:11:48
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil xalay ka dhacay deegaan dhanka galbeed uga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
0 Wednesday May 13, 2020 - 08:33:16
0 Tuesday May 12, 2020 - 14:11:18
0 Tuesday May 12, 2020 - 11:06:29
Tiradii ugu badneed oo mar qura kasoo goosata ciidamada maamulka Axmed Madoobe ayaa lagusoo bandhigay deegaan katirsan gobolka Jubbada Hoose.
0 Monday May 11, 2020 - 21:25:58
0 Monday May 11, 2020 - 21:22:26
Xoogaga Al Shabaab ayaa markale weeraro safballaaran ah ku qaaday saldhigyo ay ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka dowladda Federaalka ay ku leeyihiin deegaanno katirsan Sh/Hoose.
0 Monday May 11, 2020 - 20:47:49
0 Monday May 11, 2020 - 14:01:30
Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Brack Obama ayaa dhaleecayn kulul ujeediyay Donald Trump oo uu ku sifeeyay nin isla qab weyn oo maamulkiisu kusoo koobmay Fowdo iyo musiibo.
0 Monday May 11, 2020 - 12:25:21
Magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud waxaa lagusoo gunaanaday tartanka Qur'aanka ee bisha barakaysan ee Ramadaan.
0 Monday May 11, 2020 - 11:31:15
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro khasaara lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka maamulka Jubbaland ee ku sugan deegaan katirsan gobolka Jubbada Hoose.
Dhageyso: Xalqada 17aad ee Barnaamijka Al Xuruubu Saliibiyah.
0 Monday May 11, 2020 - 10:50:04
0 Sunday May 10, 2020 - 17:12:11
0 Sunday May 10, 2020 - 16:52:30
R/wasaaraha Talyaaniga ayaa xaqiijiyay in lasii daayay haweenay Italian ah oo muddo 18 bilood ah ku qafaalneed gudaha dalka Soomaaliya.
0 Sunday May 10, 2020 - 12:25:35
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay iska hor'imaad hubaysan oo gudaha magaalada Muqdisho ku dhaxmaray ciidamo kawada tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Saturday May 09, 2020 - 21:42:18
Weerar madaafiic ah ayaa markale caawa maqribkii lagu qaaday saldhigga ugu weyn ee ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya.
0 Saturday May 09, 2020 - 13:44:37
0 Saturday May 09, 2020 - 12:40:04
0 Saturday May 09, 2020 - 12:39:04
0 Saturday May 09, 2020 - 12:28:45
0 Saturday May 09, 2020 - 10:21:52
« Prev1 ... 6789101112 ... 353Next »